သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: ကျမ မမြင်ချင်တော့သော အပိုင်း (၃)
ကျမ မမြင်ချင်တော့သော အပိုင်း (၃)
ကျမချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်မှာ နေတာ စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းတယ် ဆိုတာ ဒါမျိုးတွေကြောင့်ပေါ့။
ခုလေးပဲ.. အိမ်ရှင်တို့ ဆိုပြီး ခြံတံခါးကို ၀ုန်းဒိုင်း လာကျဲသွားတယ်။ လူတွေကလည်း ရပ်ကွက်လူကြီးလိုလို..၊ အာဏာပိုင်တွေကလိုလို၊ အလိမ်ခံ အညာခံရတာတွေ များလာတော့ အိမ်လာအလှူခံတဲ့ လူတွေဆိုရင် အထဲကနေသာ ချောင်းကြည့်ပြီး အသာငြိမ်နေဖြစ်တာ များတယ်။ ကလေးတွေကတော့ လူလာရင် အပြင်ပြေးထွက်တတ်လို့ သူတို့ကို အမြဲ တားနေရတယ်။ ဘုမသိ ဘမသိ ပြောချင်တာတွေ စွတ်ပြောလိုက်မှာစိုးလို့...။
ခုလာတာက လျှပ်စစ်ရုံးကလို့တော့ ပြောတယ်။ ဘာယူနီဖောင်းမှ ၀တ်မလာဘူး။ အိမ်မှာ တပ်ထားတဲ့ မီတာ နှစ်လုံးမှာ တစ်လုံးကတော့ အဖုံးပါတယ်..။ တစ်လုံးကတော့ အဖုံးမပါလို့ လာစစ်ရင် ပြဿနာတက်မယ် ဘာညာပြောတော့ အိမ်ကို ရောက်နေတဲ့ အစ်ကိုက လာပြောတယ်။ သူတို့ကို တပ်ခိုင်းရင် ငါးထောင်ပဲ ပေး။ ခုချက်ချင်း လာတပ်ပေးမယ်တဲ့။ အစ်ကိုဆိုတာကလည်း မလည်မ၀ယ်ရယ်..။ ကျမက ငွေငါးထောင်ကို နှမြောတာမဟုတ်ပေမယ့် အဲဒီလို လုပ်စားတာမျိုးကိုဆို စိတ်ထဲ သိပ်မကျေလည်ဘူး။ ဒါက ကျမရဲ့ သံသယ ပြဿနာ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်သွားတာမျိုးလည်း မဟုတ်။ ယူနီဖောင်းလည်း မပါ၊ ခြိမ်းခြောက်ပြီး တောင်းဆို အေးဒမြ တိုက်နေတာတွေကို ကျမတို့ ပြည်သူတွေ ခံရတာ များနေပါပြီ။ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ ကိုယ်နေပြီး အိမ်ပေါက်ဝ ဧည့်သည်ရောက်ရင် ရင်ထိတ်နေရတာမျိုး...။ အခုလည်း သီတင်းကျွတ်ခါနီးပြီဆိုတော့ အလှူခံတွေက တယ်ပေါလာတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ..။
အဲဒါ တစ်နေရာထဲမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ နေရာအနှံ့ပါပဲ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေက ကိုယ့်ခွင်ထဲ ရောက်တာနဲ့ လက်မလွတ်စတမ်း၊ ချော့တောင်း၊ ခြောက်တောင်း၊ ညစ်တောင်း.... မြှောက်တောင်း။ ဘာပဲပြောပြော ပေးရတာချင်းအတူတူဆိုရင်တောင် ချိုချိုသာသာနဲ့ ချော့မော့ မြှောက်တောင်းခံရတာ တော်သေးတယ် ထင်တာပါ။ အခုကျတော့ ဟောက်စား၊ ခြောက်စားတွေက များနေပါပြီ။
အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရုံးတွေသွားဖို့ကိုဆို ကျမ ခြေလှမ်းတွေက နောက်ပြန်သာ ပြေးလိုက်ချင်တော့တာပါပဲ။ အမျိုးသားကတော့ ပြောတယ်။ ဘာမှ မပေးပဲ နေလို့ ရပါတယ်။ ထိုင်သာ စောင့်နေ..။ ကိုယ့်နောက်က လူတွေ ကိုယ့်ကို ကျော်တက်သွားမယ်... ကိုယ့်အလှည့် ဘယ်တော့ရောက်မလဲ.. သွားမမေးလေနဲ့။ အရေးတယူ ဖြေချင်တဲ့သူ မရှိပါဘူး။ အဲဒီလို ရုံးတွေသွားရင် အမြဲတမ်းပြောင်းနေတဲ့ သူတို့ရုံးတွေရဲ. လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ မသ်ိရကောင်းလား အဟောက်တောင်ခံလိုက်ရဦးမယ်။ အဲ.. သိပ်အ နေတဲ့ ပုံပေါက်နေရင်တော့ လိုင်းရှိတယ်.. လိုင်းဝင်ရင် မြန်တယ်ဆိုပြီး သတင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
တခါတခါ ကိုယ်တွေက စောင့်နေတုန်း သူတို့တွေက အရှေ့တည့်တည့်မှာ...။ သူတို့ကတော့ ပြန်ဖို့ ပြင်ဆင်၊ အလှအပတွေ လုပ်၊ ရထားတဲ့ ဝေစုတွေများ ခွဲဝေခြမ်းနေလိုက်ကြတာ.. ရှေ.က လူငုတ်တုတ်တွေကိုတောင်မှ လူရယ်လို့ မသတ်မှတ်တော့သလိုပါပဲ...။
ခြတက်နေတာက အောက်ခြေကပဲ စ လာတာလား၊ အိမ်ခေါင်မိုး ထုတ်တန်းတွေကပဲ စပြီးဆင်းလာတာတော့ မသိ။ ကျမတို့ အိမ်ကြီးလည်း တစ်လုံးလုံးကို ခြစားထားလို့ မွနေပါပြီ။ အူမ မတောင့်လို့ သီလ မစောင့်နိုင်ခြင်းလား၊ ကိုယ်ကျင့်သီလဆိုတာ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ဆွေးမြေ့နေတဲ့ စကားလုံး ကလီရှေးများ ဖြစ်သွားပြီလားပဲ.. အူချာချာအတွေးတွေနဲ့ပဲ ကျမတစ်ယောက်တည်း အီလည်လည် ကျန်ရစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
Posted by tg.nwai at 12:54:00 PM
အဲ့ဒိ ရုံးပြင်ကန္နား တွေကတော့ မြန်မာလိုပြောနေတာတောင် သူတို့ပြောတာတွေ တို့နားမလည်လို့ စိတ်ပိန်ခဲ့ရပေါင်းများလှပေါ့။ ပန်းဆိုးတန်းက အခွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ရုံးတစ်ရုံးမှာ အလှူခံပလတ်စတစ်ခွက်လေးတွေချထားတဲ့ စားပွဲတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြတ်ကျော်ပြီးမှ အရာရှိရဲ့ စားပွဲရှေ့ရောက်သွားပါတယ်။ တို့ကို နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့စကားက ညီမလေးက ဒီရုံးမှာ အသိရှိလားတဲ့။ တို့လည်း မရှိပါဘူး လို့ ဖြေပြီးမှ သူဘာမေးလို့ ငါဘာဖြေမှန်းမသိပါလား ဆိုတာ ဆက်တွေးမိပြီး ???
ဟုတ်ပါတယ်TDရေ..။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ကို မစဉ်းစားနိုင်ပဲ ဘယ်လိုညှစ်မှထွက်မယ် ဆိုတာ စဉ်းစားနေကြတာတော့ ရင်နာစရာပါပဲ။